कालो बिरालोले बाटो काट्दा किन अशुभ मानिन्छ ? | KTM Khabar
२०७५ बैशाख ७ गते १५:५५ मा प्रकाशित
बिरालोसँग जोडिएको केहि अशुभ अन्धविश्वास हो या सत्य यस कुरालाई लिएर प्रायः मानिसहरु अन्योलमा रहने गर्दछन् । जब कुनै बिरालोले बाटो काट्छ तब मानिसहरु त्यहिं रोकिने गर्दछन् र आफू भन्दा अघि अरु कोही जाउन भनेर प्रतीक्षा गर्ने गर्दछन् । कहिले–काही मानिसहरु डरले आफ्नो बाटो नै बदल्ने गर्दछन् । आखिर यस्तो किन ? यसको व्याख्या यस्तो रहेको छ ।
बिरालोलाई मांसाहारी, जंगली र अशुभ जानवर मानिएको छ । नारद र वराह पुराणको शुभ–अशुभको बारेमा बिरालोलाई लिएर केही व्याख्या गरिएको छ । पुराण अनुसार बिरालोलाई देखिनु, बाटो काट्नु, रुनु र घरमा आउनु–जानु अशुभ मानिएको छ । बिरालोले घरमा नकारात्मक ऊर्जा ल्याउने गर्दछ ।
त्यसैले बिरालोलाई घरमा पाल्नु अशुभ मानिन्छ । बिरालो आउदा अशुभ घटनातर्फ इशारा गर्ने गर्दछ । बिरालोलाई केवल नेपालमा मात्र नभएर अन्य देशहरुमा अशुभ मानिने गरिन्छ । जर्मनीमा बिरालोले दायाँबाट बायाँतर्फ बाटो काट्नु अशुभ मानिन्छ । जानकारीको लागी मध्य युगमा यसलाई चुडेलको सहायक पनि मानिने गरिन्थ्यो । यसको अलावा यस्तो पनि मान्यता रहेको छ कि यदि बिरालो तपाइको अगाडिबाट टाढा जान्छ भने सम्झनुहोस् तपाइको राम्रो समय चलिरहेको छ । यस्तै यूरोपको कैयौं भागहरुमा कालो बिरालो देखिनु अशुभ मानिन्छ ।